I-Spring Foam Matiss | Rayson
Ukuthembela kubuchwepheshe obuthuthukisiwe, amakhono amahle okukhiqiza, kanye nensizakalo ephelele, iRayson ihola embonini manje futhi isakaza iRayson yethu emhlabeni wonke. Ngokubambisana nemikhiqizo yethu, izinsizakalo zethu nazo zinikezwa njengezinga eliphakeme kakhulu. Umatilasi we-Foam wasentwasahlobo besilokhu sitshala imali eningi kuMkhiqizo R & D, okuvela ukuthi siphumelele ukuthi sithuthukise umatilasi we-Foam wasentwasahlobo. Ukuthembela kubasebenzi bethu abasha nabasebenza kanzima, siyakuqinisekisa ukuthi sinikeza amakhasimende imikhiqizo engcono kakhulu, izintengo ezinhle kakhulu, kanye nezinsizakalo eziphelele kakhulu. Uyemukelwa ukuxhumana nathi uma unemibuzo.Lokhu izici zomkhiqizo ukumunca umthelela. Izinto zayo zendwangu zinamandla okuhlinzeka ngesiko nokuvikelwa ngokuthola amandla okufiphala okungazelelwe noma ukushaqeka.